Mayelana ne-Us-Chengdu Zhengheng Auto Parts Co., Ltd.
Siyinkampani eqhutshwa izidingo zamakhasimende futhi sizibophezele ekuhlinzekeni imikhiqizo namasevisi ngokwezifiso zawo wonke amakhasimende.Namuhla, njengabahlinzeki bezinjini nezingxenye ezihlobene, sithatha "amabhulokhi enjini" njengemikhiqizo yethu eyinhloko, futhi sigxile "kuma-cylinder heads, amakepisi okuthwala, imizimba yephampu kawoyela, izindlu zama-gearbox, izingxenye ze-chassis, izingxenye ze-aluminium eziphonsiwe, njll. ."Ukuhlinzeka ngosekelo lwamandla okusebenza oluzinzile kanye nezixazululo ezihlelekile zamakhasimende omhlaba emikhakheni eminingi.
I-Zhengheng inezimboni ezine zokukhiqiza e-China, isikhungo sokuhlola izinto ezibonakalayo nesakhiwe, isikhungo sokuqala sobuchwepheshe be-cylinder yase-China sine-plasma spraying technology, kanye nesikhungo sokuphrinta se-3D.Njengamanje, isiklame futhi yakhiqiza izinhlobo ezingaphezu kuka-150 zamabhulokhi enjini yensimbi kanye nezinhlobo ezingu-30 zamabhulokhi enjini ye-aluminium ekhonjiwe.Isamba senani lama-cylinder blocks athengisiwe sedlule ku-20,000,000 ngo-2018. Inethiwekhi yayo yokuthengisa ihlanganise izifundazwe nezifunda ezingama-34 e-China, kanye namazwe aphesheya kwezilwandle njenge-United States, Germany, Japan, Switzerland, ne-Australia.
UZhengheng uneminyaka engaphezu kwengama-44 yesipiliyoni esicebile sokukhiqiza nomlando wokusebenza.Umkhiqizo ngamunye wamukela ngokuqinile isitifiketi sekhwalithi samazwe ngamazwe se-IATF 16949, isitifiketi se-ISO14001 sohlelo lokuphathwa kwemvelo, isitifiketi sohlelo lokuphatha ukuphepha lwe-OHSAS18001 kanye nohlelo lokuphathwa kokukhiqiza olunciphile lwe-TPS.Isikhathi sokulethwa esishesha kakhulu se-prototype singafinyezwa sibe yizinsuku ezingama-25.
Sebenzisa uhlelo lokuphatha lweToyota TPS
Ngo-2006, waphumelela ukuhlolwa kwe-GM-QSB
Ngo-2015,uphumelele ukuhlolwa kwe-EHS kwe-GE
Ngo-2016, ukuqaliswa kohlelo lokuphatha lwe-Changan QCA
Ngo-2017, sungula futhi usebenzise uhlelo lokuphatha lwe-ZHQMS
Ithimba le-R&D elihle kakhulu
UZhengheng ugxile ekwenzeni amabhlogo enjini ngokwezifiso kanye nokulingisa okuncane okuhlukahlukene.
Ukusuka emidwebeni kuye kumasampula aqediwe, iqoqo lokuqala lamasampula lingalethwa zingakapheli izinsuku ezingama-55.
UZhengheng unekhono elithuthukile lokuhlanganisa umkhiqizo nobuchwepheshe, ufaka impahla yengqondo yabo bonke abasebenzi ekuthuthukisweni nasekuthuthukisweni kwemikhiqizo, futhi usebenzisana namanyuvesi asekhaya aziwayo njengeSichuan University kanye neKunming University of Science and Technology ukusungula i-Foundry Research Institute, i-Thermal Spray Research Institute. , kanye nezikhungo zocwaningo lwe-Intelligent Manufacturing, njll., ezisiza uZhengheng ukuthi aqhubeke nokuthuthuka.
Sinabasebenzi abangu-1,500, okuhlanganisa nezisebenzi zobunjiniyela nezobuchwepheshe, onjiniyela abakhulu nabafundisi abavela e-Japan, Germany, nase-Austria.Lokhu akuqinisekisi kuphela izinga lokuqala lemikhiqizo ye-Zhengheng, kodwa futhi kuvumela imikhiqizo yakwa-Zhengheng ukuthi igqekeze isiko bese ichitha i-Innovation.
Njengomphakeli wemikhiqizo esekelayo embonini, uZhengheng unenzuzo yokuncintisana yesikhathi eside futhi ezinzile.Inikeza iziqinisekiso ezivela olwazini nolwazi, ukuphepha nokuzinza, imikhiqizo yekhwalithi ephezulu, kanye nezicelo zamapulatifomu amaningi.Imikhiqizo yethu isiyiToyota, GM, Hyundai, SAIC, abahlinzeki Abafanelekayo bezinkampani ezinkulu ezikhiqiza izimoto ezifana neGreat Wall, Changan, Geely, njll.
I-workshop yokukhiqiza yokufa
•Amasethi angama-26 emishini yokuphonsa ifa asukela kumathani angama-200 kuye kwangama-6000;
•Umkhiqizo wonyaka wamathani angaphezu kuka-10,000
•Ukunikezwa kwezinto ezingavuthiwe okuzenzela wena ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yemikhiqizo evela emthonjeni
•amathani ayi-100,000 ngonyaka, kufaka phakathi amabhulokhi amasilinda kanye nokusakazwa okuncane
•Imigqa yokukhiqiza engu-7
•I-iron castings empunga, i-ductile iron castings kanye ne-vermicular cast iron castings
•Isistimu yokwelapha isihlabathi ebuyiselwe ngokushisa ibona ukugaywa kabusha kwesihlabathi
•Imigqa yokukhiqiza eyi-16, isikhungo sokuthuthukisa esi-2
•Umthamo wonyaka wokukhiqiza wamabhulokhi angama-cylinder ayi-1000,000 kanye nomthamo wokucubungula eminye imikhiqizo eyizigidi ezi-2